China Ugboro abụọ mkpọchi Air valvụ ụlọ ọrụ na-emepụta | Juda
Ngwaọrụ mkpọchi ikuku nke abụọ bụ ngwa ọrụ mkpuchi zuru ezu nke ụlọ ọrụ anyị mepụtara dịka ọnọdụ nrụpụta si dị.
10. Usoro mkpọchi ikuku
Ngwunye valvụ a na-ekpochi ikuku abụọ: bụ otu n'ime usoro dị mkpa na ịmepụta ọkụ ọkụ lime. Ihe izugbe ash mwepụ akụrụngwa bụ ịkwụsị ikuku na iyuzucha ash, a akụrụngwa bụ na-ikuku na mechie ash: na usoro nke ash mwepụ, n'ihi na adiana akara nke abụọ baffles, combustion ikuku agaghị ihihi si akụkụ dị ala, nke nwere ike ịkwalite ogo na mmepụta nke wayo n'ụzọ dị irè.
Ọdịdị nke akụrụngwa: ngwaọrụ ahụ nwere igbe dị elu na nkebi nke abụọ, igbe nke ọ bụla na-agụnye baffle, ogwe aka nke dị n'ime, spindle, ogwe aka mpụta, cylinder, valve solenoid, valve control ọsọ, akụkụ pneumatic, akụkụ mmanụ. (na-ezo aka mmasị osise).
Oke nke akụrụngwa: nlereanya JD200-JD300 、 ash ebutu ikike 70 T / h-100T / h 、 na-arụ ọrụ mgbali 0.4 MPa-0.4MPa
Mmepụta 100-300 T / D temperature Na-arụ ọrụ okpomọkụ <100 ℃ 5000 kg- <100 ℃ 8000
Ofkpụrụ nke akụrụngwa: valvụ abụọ nwere ọkwa na-arụ ọrụ ọzọ n'okpuru njikwa eletriki iji hụ na ikuku ọkụ anaghị esi n'akụkụ ala. A na-emeghe ma ọ bụ mechie eriri valvụ nke abụọ site na ogwe aka rocker n'okpuru ọrụ ọzọ nke cylinder. Mgbe emeghere ahụ dị elu, ash agwụchara site na agbụrụ nke elu gaa n'elu eriri ahụ dị elu, mgbe emechichara elu ahụ mechiri, mepee ahụ mgbatị ahụ dị ala, mepee ash nke nchekwa dị n'elu ga-adaba na ngwụcha belt ngwaahịa site na ala valvụ ahụ iji wuchaa a ash mwepụ edinam.
Njirimara nke ikuku mkpọchi ikuku:
akụrụngwa nwere akụrụngwa nwere akụkụ anọ, na-aga n'ihu na mbupu ash iji mee ka oku ahụ dị mma, anaghị emetụta ikuku ikuku na-aga n'ihu.
b ash mwepụ usoro anaghị afanyekwa, mmebi wayo ngọngọ.
c ngwá ọrụ nkwadebe, a pụrụ ịdabere na ya, na-enweghị mmezi ugboro ugboro, ọnụego ọdịda dị ala.
Nke gara aga: Combustion ofufe
Osote: Fastigiate Wayo Agbapụta Machine
Kiln Isi Steel Assembly
7. n'ekwú ọkụ usoro kiln isi Ọdịdị: oku ahu shei maka metal shei, wuru refractory brik. Kiln refractory ihe onwunwe bụ: a oyi akwa nke refractory Adobe Red Adobe A oyi akwa nke aluminom silicate eriri chere slag The mmepụta ikike bụ 100-300 tọn wayo kwa ụbọchị. Okpokoro nke oku ahụ bụ mita 4.5-6.0, mpụga dị n'èzí bụ mita 6.5-8.5, ogo dị elu nke oku ahụ bụ mita 28-36, na ngụkọta dum bụ mita 40-55. The n'ekwú ọkụ ụdị na mkpuchi, Multi-oyi akwa mkpuchi m ...
Cache ịwụ Na n'ekwú n'elu
Cache Sistem Ahụ hopper bụ akụkụ anọ dị iche iche, a na-enye efere na-eme ka mgbidi dị n'ime ahụ nwee oghere, oghere a na-enwe oghere dị n'akụkụ etiti efere abụọ ahụ na-esote ya, na njedebe dị n'okpuru nke efere ọzọ nke baffle na-enye ya na ihuenyo . Ọdịdị nke akụrụngwa dị mfe, ọ nwere ike ịghọta ọrụ nke nchekwa na nchekwa nwa oge site na efere ahụ, ihe na-ada na ala nke ihuenyo vibrating dị karịa, ọrụ ahụ bụ pro ...
Ọnwụ ndị Juu - 300 tọn / ụbọchị X4 Lime kilns na Luoyan ...
Aha aha oru ngo a: Mbupute nke afọ 300,000 nke gburugburu ebe obibi na nchekwa ọkụ na-azọpụta ọkụ wayo bụ ebe a na-arụ ọrụ: Guigang obodo, Guangxi Province, China Ngalaba ọrụ teknụzụ: ụlọ ọrụ nchekwa gburugburu ebe obibi nke Juda “Anyị chọrọ ugwu ugwu ndụ na mmiri doro anya. tinyekwara ugwu ọla edo na ọla ọcha, achọrọ m inwe mmiri dị ọcha na ugwu na-acha akwụkwọ ndụ karịa ugwu ọla edo na ọla ọcha, na mmiri dị ọcha na ugwu na-acha akwụkwọ ndụ bụ ugwu ọla edo na ọlaọcha ...
Calcium hydroxide Production Line akụrụngwa, Calcium oxide na Calcium hydroxide, Aha Azụmaahịa nke Calcium Oxide, Calcium hydroxide akụrụngwa, Ime Calcium hydroxide, Calcium Hydroxide Ime,